बुधबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा एक साता लम्बियो, यसअघिका सुविधा खारेज ( बुँदासहित)
5th May, 2021 Wed ०९:०६:१० मा प्रकाशित
काठमाडौं । बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा एक साता थप गरिएको छ । बुधबारदेखि एक साता निषेधाज्ञा थपिएको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्न निषेधाज्ञा लम्बाइएको बताएका छन् । उनका अनुसार थपिएको निषेधाज्ञालाई अघिल्ला दिनहरुको भन्दा कडा बनाइने निष्कर्ष निकालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जनाए अनुसार यस अघि दिएको सुविधालाई रोक लगाएको छ ।
१. साँझपख पनि पसल खोल्न पाउने यस अघिको व्यवस्था हटाएर बिहान ९ बजेसम्म मात्र खाद्य वस्तुका पसलहरु खोल्न पाइने छ ।
२. यसअघि जारी गरिएका सबै सवारी पास खारेज गरिएको छ । अबदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नयाँ पास जारी गर्नेछन् ।
३.पत्रकारहरुका लागि सूचना विभागको पास अनिवार्य गरिएको छ । सूचना विभागको पास नभएकाहरुको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई जानकारी गराएरमात्रै अफिसको परिचयपत्र लिएर हिडन पाउनेछन् ।
४.सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बीमालगायतका कार्यालयमा एक चौथाइ कर्मचारी मात्र राखेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्ना शाखा कार्यालयमध्ये २५ प्रतिशत मात्र खुला राख्न पाउनेछन् । केन्द्रीय कार्यालयमा २० प्रतिशत जनशक्ति मात्र राखेर काम गर्नुपर्नेछ ।
५. सम्बन्धित पालिकाले अनिवार्य रुपले १० दिन क्वारन्टिनमा राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिस दिए मात्रै काठमाडौं उपत्यका छाड्न पाइनेछ ।
६.अत्यावश्यक कार्य, बिरामी, कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा विषय खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने छ । विवाहका लागि सवारी पास आवश्यक नपर्ने र दुरी कायम गर्ने गरी साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
७.फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसाय र कवाडी संकलन गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।
Tags निषेधाज्ञा काेराेना काठमाडौं